ESI EWEPU NTANETI NDU NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Wepu ntaneti ndu na Photoshop
A na-eji windo azụ ma ọ bụ "hromakey" mee ihe mgbe ị na-agbapụ maka ngbanwe ya na nke ọzọ. Igwe chroma nwere ike ịbụ agba dị iche iche, dị ka acha anụnụ anụnụ, ma a na-ahọrọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ọtụtụ ihe kpatara ya.
N'ezie, ịgba égbè na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eme mgbe ederede ma ọ bụ mejupụtara.
Na nkuzi a anyị ga-agbalị iji qualitatively wepụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na foto foto na Photoshop.
Wepu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
E nwere ụzọ ole na ole iji wepụ nzụlite site na foto. Ọtụtụ n'ime ha bụ ihe niile.
Ihe omumu: Wepụ nwa ndabere na Photoshop
Enwere usoro nke kachasị mma maka iwepu chromakey. A ghaghị ịghọta na site n'ịgba égbè ahụ nwekwara ike ịnweta okpokoro ọjọọ, ịrụ ọrụ nke ga-esi ike, na mgbe ụfọdụ ọ gaghị ekwe omume. Maka nkuzi a, a hụrụ foto a nke nwa agbọghọ na-acha akwụkwọ ndụ ndụ:
Anyị na-aga n'ihu iwepu chromakey.
Mbụ, ịkwesịrị ịsụgharị foto ahụ n'ime oghere agba. Ụlọ nyocha. Iji mee nke a, gaa na menu "Ụdị foto - ma họrọ ihe achọrọ.
Ọzọ, gaa na taabụ "Ọwa" wee pịa ọwa "a".
Ugbu a, anyị kwesịrị ịmepụta otu ọwa a. Ọ bụ ya na anyị ga-arụ ọrụ. Anyị na-eji bọtịnụ aka ekpe na-abanye ọwa ahụ ma dọrọ na akara ngosi ahụ na ala nke palette (lee nseta ihuenyo).
Oghere na-enye aka mgbe ịmepụta oyiri ga-ele anya dị ka nke a:
Nzọụkwụ ọzọ bụ inye ụzọ kachasị dị iche iche, nke ahụ bụ, ndabere ga-eme kpamkpam nwa na nwa agbọghọ ahụ na-acha ọcha. A na-enweta nke a site na iji mejupụta ọwa na agba ọcha na oji.
Pịa igodo Nchikota SHIFT + F5wee mepee window ntọala ahụ. N'ebe a, ọ dị anyị mkpa ịhọrọ agba ọcha na ndepụta ndọpụta ma gbanwee ọnọdụ ngwakọta "Gbanye".
Mgbe ịpị bọtịnụ Ok anyị na-enweta foto na-esonụ:
Mgbe ahụ, anyị na-emeghachi otu omume ahụ, ma ọ bụ oji.
Ihe si na njuputa:
Ebe ọ bụ na arụpụtaghị ya, anyị na-azaghachi ihe juru, oge a malite na nwa. Kpachara anya: buru ụzọ jupụta n'ọwa ahụ na-acha oji ma na-acha ọcha. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a ezuola. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na omume ndị a ka ọnụ ọgụgụ ahụ adịghị acha ọcha, ebe ndabere ya bụ oji, ma mezie usoro ahụ.
Ọwa anyị kwadebere, mgbe ahụ ịkwesịrị ịmepụta otu mbiet mbiet ahụ na palette nke dị na ụzọ keyboard CTRL + J.
Gaa na taabụ na ọwa ahụ ma megharịa otu ọwa. a.
Jide igodo Ctrl wee pịa thumbnail nke ọwa, ịmepụta mpaghara a họrọ. Nhọrọ a ga-ekpebi ihe na-emepụta ihe ọkụkụ ahụ.
Pịa na ọwa nwere aha "Ụlọ"gụnyere agba.
Gaa na palette paịlị, na bido nke ndabere, ma pịa akara ngosi ahụ. A na-ewepụ ya ozugbo. Iji hụ nke a, wepụ visibiliti site na oyi akwa.
Anyị kpochapụrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ma ọ bụghị ezi. Ọ bụrụ na ịbịgharịa, ị nwere ike ịhụ oke ala na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke a na-akpọ halo.
A naghị ahụcha ọkụ, ma mgbe a na-etinye ihe nlereanya ahụ n'ọnọdụ ọhụrụ, ọ nwere ike ịkụda ihe ahụ, ọ dịkwa mkpa iji wepụ ya.
1. Mee ka mkpuchi oyi akwa, jide ala Ctrl ma pịa ya, na-ebudata mpaghara ahọrọ.
2. Họrọ ngwaọrụ ọ bụla nke otu a. "Mee ka".
3. Iji dezie nhọrọ anyị, jiri ọrụ ahụ "Gbanwee Edge". Mpempe akwụkwọ kwekọrọ na nke dị n'elu panel nke parameters.
4. Na windo arụ ọrụ, gbanwee nhọrọ ịhọrọ ma mee ka "ladders" nke pikselụ dị ntakịrị. Biko mara na maka mma, a na-ahọrọ ọnọdụ elele anya. "Na-acha ọcha".
5. Dee mmepụta ya "New Layer na akwa mkpuchi" wee pịa Ok.
6. Ọ bụrụ na ịmechara omume ndị a, ụfọdụ ebe ka na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ha nwere ike iwepụ ya na aka ojii, na-arụ ọrụ na nkpuchi ahụ.
Ụzọ ọzọ a ga-esi kpochapụ ọkụ ahụ kọwara n'ụzọ zuru ezu na ihe mmụta ahụ, njikọ nke e gosipụtara na mmalite nke isiokwu ahụ.
N'ihi ya, anyị nwere ike iwepụ ahịhịa ndụ na foto ahụ. Ọ bụ ezie na usoro a adịchaghị mgbagwoju anya, ọ na-egosi n'ụzọ doro anya ụkpụrụ nke ịrụ ọrụ na ọwa mgbe ọ na-ewepu akụkụ monochromatic nke ihe oyiyi.